Go’aanka Cusub Ee Golaha Bad baado Qaran Udireen Madaxweyne Farmaajo – XAMAR POST
Golaha Badbaado Qaran ayaa qoraal ay soo saartey waxay si cad kaga hor-timid shirka uu 22-ka Maarso u muddeeyay madaxweynaha waqtiga ka dhamaadey Maxamed Cabdullaahi Maxamed [Farmaajo].
Qoraalka ayay u direen madaxa UN-ka, wasiirka arrimaha dibada Mareykanka, xoghayaha arrimaha dibada Ururka dalalka ku midoobay Barwaaqo Sooranka, Midowga Yurub, Midowga Afrika, IGAD, OIC, iyo Jaamacada Carabta.
Bayaanka oo luuqad adag lagu qoray ayay ku qeexeen Farmaajo “in uu yahay caqabada ugu weyn ee hortaagan qabsoomida doorashooyinka 2020-21 iyo in ay noqdaan kuwa loo-dhan-yahay xor iyo xalaalna ah”.
“Ku dhawaaqidiisa shirkii 5aad si hal dhinac ah iyaddoo xadgudubyadda uu geysanayo ay sii socdaan, waxay salka ku haysaa oo ay sii hurineysaa qalalaasaha iyo kalsoonida lama filaanka ah ee daneeyeyaasha dhextaala,” ayay sheegeen.
Golaha ay ku mideysan yihiin Puntland, Jubaland, Afhayeenka Aqalka Sare iyo Musharaxiinta ayaa hoosta ka xariiqay in muhiim ay tahay in Farmaajo “lagula xisaabtamo “cilada uu ku carqaladeynayo doorashooyinka”.
“Kulanka horudhac ah ee uu kaga horudhacay dedaaladda Beesha Caalamka waxay qeyb ka tahay xeeladaha uu ku waxyeeleynayo horumarka laga sameeyay wadahadalada loo dhan-yahay kuna quruxsanayo waqtiga ka dhacay,” ayay xuseen.
Ammaanka ayay codsadeen in laga wareejiyo taliska maamulka Farmaajo kahor shir-madaxeedka loo balansanyahay kaasoo xal waara loogu goobayo is-mari-waaga daba-dheeraaday ee doorashooyinka.
Talaabooyinkii uu Farmaajo ciidamada ugu daabulay gobolka Gedo iyo isku dayga uu ku doonayo in uu kula wareego amniga garoonka Aadan Cadde ayay cambaareeyeen, iyaga oo ka digay in xaalada ay sii xumeyn karto.
Ugu dambeyntii, qoraalkii dhowaan kasoo baxay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayay soo dhaweeyeen, iyaga oo guud ahaan shacabka iyo Beesha Caalamka ku booriyey in ay taageeraan dedaalada lagu goobayo kala guur nabdoon.
DHAGEYSO: Xasan Daahir Aweys “Farmaajoow Walaaloow Nimankaan Ha Isku Bacdaadin”